Hadisoana voambolana – MyDago.com aime Madagascar
Mila mifona (sy miala tsiny) Rajoelina Andry?
Tsy hadalàna tsy akory ny an’ny razantsika raha niteny fa avadibadiho im-pito ny lela rehefa hiteny. Aza manao tora-po sy resaka “fankahalana” fotsiny raha te-hisora-tena ho “filohan’i Madagasikara”. Tsy diso ny fananarana natao hatrizay fa “tsy hainao io fa haranany, ao amin’ny atiny ianao no mila mivokona sy misisika tsara”. Ny heloka (hadisoana) ibaboana mody rariny, fa ny marina itompoana mody heloka.
Tsy filoham-pirenena akory Rajoelina Andry, ary efa nolazaina matetika ho fantatry ny rehetra fa “filoham-panjakana” araky ny taratasy norangotin’ny olona miisa 402 teny Ivato tamin’ny 9 martsa 2011 ny tenany. Mety ho mbola iadian-kevitra ihany koa ny filazana fa efa miaina ny Repoblika vaovao faha-efatra isika. Noho izany dia manahirana ny miresaka famotsoran-keloka faobe ho andrikitry ny “filoham-panjakana”, na koa ho adidin’ny ”parlemantera notendrena” no hamaritana izany. Ny heloka ara-politika dia mifarana sy miravona araky ny fifanarahana politika ihany. Mety hitarika hadisoana sy ratra eo amin’ny fitsarana sy/na hitarika ihany koa tsy fahatokisana ny fitsarana ny famadihana ny raharaha politika ho ady heloka tsotra, na ady heloka bevava. Ny ady (nifanaovana), izay mitarika “vono olona” dia mila fitsarana amin’ny fomba tony, tsy tokony hisy baiko avy amin’ny mpandresy na avy amin’ny resy izany fitsarana izany. Tsy ilaina akory anefa ny fitsarana raha misy ny dinika sy fifanarahana ara-politika mamafa ny heloky ny andaniny sy ny ankilany(?). Toy izany no natao tao Afrika Atsimo raha noravàna ny fanavakavaham-bolokoditra.
Mifona na/sy mila tsiny
Tamin’ny 21 martsa 2009, dia teny sy kabary teo Mahamasina no nampibanaka ny fonja teny Tsiafahy, ary samy nahatadidy ny rehetra fa nogadraina tamin’ny “fomba hafahafa” teny amin’ny Resto Gasy ny olona nivoaka tamin’iny fotoana iny. Tsy voadinika izay resahina fa entina amin’ny fihetseham-po fotsiny, toy ny filazana indray fa tsy hahazo famotsoran-keloka velively ny “mpamono olona”. Fahefana avy aiza no ahafahan’ilay “filoham-panjakana” hiteny izany? Avy tany amin’ireo “vahoaka “ miisa 402? Rehefa diso dia diso, fa tsy misy diso hohamarinina, ary rehefa mifona sy miala tsiny dia tsy adala daholo akory ny Gasy. Izay minia ihany no tena adala indrindra.
1 pensée sur “Hadisoana voambolana”
Niteny i Rajoelina indray 16 mars 2009 izay tamin’ny France 24 hoe : « entre nous, je ne serais pas plus nul que le Président Ravalomanana »
Précédent Article précédent : Manakara, nanohina ny antso ny zanak’i Dada.
Suivant Article suivant : Heloka pôlitika